Rafitra fanangonana. Ankoatra ny configure tsotra, manaova, manamboatra install | Avy amin'ny Linux
Rafitra fanangonana. Ankoatra ny configure tsotra, manaova, manamboatra
Adrian Arroyo Calle | | fandaharana, Tutorials / Manuals / Tips
Izy rehetra na saika ny rehetra (ary raha tsy tsara vintana ianao) dia tsy maintsy nanangona programa iray avy amin'ny kaody loharano. Raha ny tena izy, amin'ny ankamaroan'ny tetikasa dia ampy ny manao a ./configure && make && fanaovana installer mba hametrahana ilay programa, fa ho hitantsika ireo fomba hafa isafidianana:
1 GNU Manaova
2 Ny BSD Make
3 fitaovana fiara
9 ny hafa
GNU Make dia rafitra fanangonana ambaratonga ambany, zavatra vitsivitsy no voalamina ary tsy misy fitsapana atao:
Tena miparitaka be
Sarotra ny mitazona
Tsy manao fitsapana
Ny BSD Make
BSD Make dia kinova hafa an'ny Make izay ampiasain'ny * rafitra miasa BSD ankehitriny. Izy io dia tsy mitovy amin'ny GNU Make, izay BSD Make feno indrindra na dia kely aza ny fiparitahany.
Endri-javatra bebe kokoa noho ny GNU Make
Tsy miparitaka amin'ny tontolon'ny Linux
Autotools dia rafitra ofisialin'ny GNU ary mamorona script antsoina hoe configure izay tsy maintsy antsointsika mba hamoronana Makefile mifanaraka aminy avy amin'ny GNU Make. Ampiasaina be io, na izany aza, maro ny olona (tafiditra ao amiko) no mieritreritra fa sarotra loatra, sarotra, miadana ary tsy mifanentana loatra.
Tena azo alamina
Fandefasana kely eo amin'ireo rafitra tsy UNIX
Manaova fitsapana be loatra (zahao ny ZAVATRA REHETRA, ary REHETRA IZAO REHETRA)
Miadana be rehefa mametraka
Mifanaraka aoriana kely
(Rafitra ankafiziko) CMake dia rafitra iray izay manonitra ny lesoka amin'ny Autotools amin'ny lafiny maro, toy ny mifanentana sy mahamety azy aoriana. Fanatsarana ihany koa ny rafitry ny fitsapana izay azo arindra tsara amin'ny filan'ny tetikasa tsirairay. Ny marina dia mihabe ny tetik'asa mampiasa CMake toy ny KDE, PortAudio, Ogre3D, sns. Azontsika atao ny mamantatra an'ity karazana rafitra ity noho ny rakitra CMakeLists.txt izay hiteraka Makefile na tetikasa ho an'ny Eclipse na CodeBlocks
Fanohanana lehibe eo amin'ny sehatra hafa
Azonao atao ny mamaritra ny fitsapana amin'ny fomba tena namboarina
Sarotra ny mahazo azy amin'ny voalohany
Tsy maintsy miasa miaraka amina abstraction ianao izay mety hampatahotra anao amin'ny voalohany
Miely kely na dia mitombo tsikelikely aza
QMake dia rafitra noforonin'i Trolltech hanambatra ireo tetikasa vita amin'ny Qt. Amin'izany fomba izany dia manisy fanamafisana betsaka amin'ny Qt i qmake ary mazàna ny endrika ampiasain'ny IDE toy ny QtCreator. Malaza be izany amin'ny tetikasa Qt fa tsy hita ivelan'ity tontolo ity:
Tafiditra tsara amin'ny Qt
Multiplatform tsara ao anatin'ny Qt
Tsy mahazatra ivelan'ny fampiharana Qt
SCons dia rafitra miorina amin'ny Python amin'ny fanangonana tetikasa C / C ++. Tsy toy ny Autotools, CMake na QMake; SCons dia tsy manangana Makefile. Ny SCons dia azo ovaina tokoa saingy io angamba no tena miadana indrindra amin'ny fandidiana tsotra
Raiso ny fitsapana marina
Boost.Jam dia kinovan'ny Perforce Jam izay ampiasaina amin'ny tranomboky malaza C ++ Boost, na dia azo ampiasaina misaraka aza ny rafitra fanangonana. Tsy toy ny GNU Make, Boost.Jam dia mampiasa Jamfiles, izay fanatsarana ny Makefiles. Tena malaza izy ireo ao amin'ny tontolo BeOS / Zeta / Haiku.
Ny fohy indrindra soratana
Fahasarotana manao fitsapana
Ninja dia rafitra novolavolain'i Google mba hanomezana rafitra haingam-pandeha haingam-pandeha natao ho an'ny an'ny tetikasa Chromium. Ninja dia tsy natao ho mora ovaina, hoy ny mpanoratra azy manokana, ny rafitra mamorona Ninja dia tsy maintsy hita. Ireo soso-kevitra dia CMake sy gyp.
Mila rafitra hafa ianao amin'ny fiterahana an'i Ninja
Afaka mampiasa rafitra hafa ianao toa ny script bash na python anao manokana. Misy ihany koa ny mpamokatra herinaratra ho an'ny fiteny tsy vazimba hafa izay azo ampiasaina toa an'i Gradle, Maven, gyp, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fandaharana » Rafitra fanangonana. Ankoatra ny configure tsotra, manaova, manamboatra
Ny Make dia tsy rafitra fanangonana, fa mpamokatra binari (na lasibatra) avy amin'ny kaody loharano. Izy io koa dia azo ampiasaina ho mpihazakazaka asa.
Tsy mitovy aminao aho fa ny BSD make dia malalaka kokoa amin'ny fampiasa, ny GNU make dia feno kokoa, ny fampiasa azy bebe kokoa. Ary milaza izany avy amin'ny zavatra niainako manokana aho, ao amin'ny BSD dia mila mametraka GNU foana aho satria ny BSD make dia tsotra be raha oharina amin'ny GNU make.
Miombon-kevitra aminao aho fa manahirana ny Autotools, aleoko mampiasa ny Makefile fotsiny. Sarotra debug ny makefiles vokarin'ny Autotools.
AdrianArroyoStreet dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra!
Raha ny hevitro, ny GNU make dia efa nentim-paharazana sy mahatoky kokoa hatrany amin'ilay programa fanaovana tany am-boalohany ary ny BSD make dia nanavao hatrany hatrany saingy mety ho nahatsikaritra zavatra hafa aho rehefa nanao ny fampitahana.
Tena marary an-doha tokoa ny autotools. Amin'ny maha-mpandray anjara ny rafitra fiasa Haiku dia voatery nandefa rindrambaiko tamina autotools aho ary helo izany. Tsy vitsy ny tranga niafarako namorona ny Makefile na ny CMakeLists.txt alohan'ny nanamboarana ity korontana ity.
Valio amin'i AdrianArroyoCalle
Mampiasa Premake4 aho izao, azo ovaina sy tsotra miorina amin'ny soratra Lua. Topazo maso raha tsy hainao.
Miarahaba anao amin'ilay lahatsoratra, fanovozan-kevitra tsotra sy fohy, tsara indrindra.
taolana dia hoy izy:
'make check' dia ampiasaina hanamarinana ny fanangonana aorian'ny fampiasana make
Mamaly ny taolana
[TIP] Mifamadiha eo amin'ny efijery fanidiana Unity sy LightDM vaovao ao amin'ny Ubuntu 14.04